दिउँसो सुत्ने बानी लागेकाे छ भने होस पुर्याउनु हाेला नत्र शरिरमा लाग्न सक्छ यस्ता ख´तराक राेगहरु ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/दिउँसो सुत्ने बानी लागेकाे छ भने होस पुर्याउनु हाेला नत्र शरिरमा लाग्न सक्छ यस्ता ख´तराक राेगहरु !
दिउँसो सुत्ने बानी लागेकाे छ भने होस पुर्याउनु हाेला नत्र शरिरमा लाग्न सक्छ यस्ता ख´तराक राेगहरु ! धेरै मानिसहरुलाई दिउसाे सुत्ने बानि हुने गरेकाे छ अजकलकाे समयमा ! अझ भनाैँ काे-राेना सुुरु भएपछि लडकाउनकाे कारण अझ मानिसहरुलाई दिउसाे सुत्ने बानि धेरै बसेकाे छ तर दिउसाे सुत्नु राम्रो हुदैन दिउँसो सुत्ने बानीले यस्तो हुन सक्छ:-
१) ब्लडसुगरको स्तर असामान्य:- दिनभरि सुत्दा रातमा निद्रा लाग्दैन । रातमा निद्रा पूरा नहुँदा भोक धेरै लाग्छ र यसले ब्लडसुगरको स्तर असामान्य गराइदिन्छ । डायबिटिज वा मोटोपनका कारण लिभर क्यान्सरको ख-तरा रहन्छ । डायबिटिज टाइप टु रोगीको अत्यधिक तौल लिभर क्यान्सरका कारण बन्न सक्छ । सामान्यतः महिलाको कम्मरको मोटाइ ३० र पुरुषको ३४ इन्चभन्दा माथि हुनुहुँदैन । अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीको एक अध्ययनले कम्मरको मोटाइ आवश्यकभन्दा ५ सेन्टिमिटर बढे पनि क्यान्सरको आशंका ७ प्रतिशतले बढ्न जान्छ ।
२) डायबिटिजको ख-तरा:- दिउँसोको समयमा एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा टाइप टु डायबिटिजको ख-तरा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्छ । युनिभर्सिटी अफ टोक्योका अनुसन्धानकर्ताले हालसालै तीन लाख व्यक्तिमा गरेको अध्ययनले दिउँसो एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा धेरै नोक्सान हुने चे-तावनी दिएको छ। अध्ययनअनुसार दिनमा हुने लामो निद्राले रातको निद्रामा गम्भीर बाधा निम्त्याउँछ । यसले मुटुसम्बन्धी रोग, ब्रेन स्ट्रोक र डायबिटिजको ख-तरा बढ्छ।
३) माइग्रेनको समस्या:- शरीरमा भिटामिन ‘के’को कमीका कारण माइग्रेनको समस्या निम्तिन सक्छ । यो बच्चा र युवा दुवैमा हुन सक्छ। अमेरिकास्थित सिसिनाटी चिल्ड्रेन्स हस्पिटल मेडिकल सेन्टरका शोधकर्ताहरूले माइग्रेनका बिरामीमाथि एक अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनअनुसार भिटामिन डी, राइबोफ्लेविन तथा कोएन्जाइम क्यु–१० को कमी माइग्रेनको समस्याका कारण बनेको देखियो ।
विज्ञहरूले भिटामिन बी-२ भरपूर पाइने दूध, बदाम, पनिरले अंगका कोषिकामा ऊर्जा दिएर माइग्रेनबाट बचाउन मद्दत गर्छ । ४) लिभर क्यान्सरको ख-तरा:- बिएमआई (बडी मास इन्डेक्स)३७ भन्दा धेरै हुँदा लिभर क्यान्सरको ख- तरा २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन जान्छ।